ဆိုလာမိုနိုကရစ်စတယ်လီဆီလီကွန်နှင့် ပိုလီခရစ်စတယ်လိုင်းဆီလီကွန်ကြား ကွာခြားချက် - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd
နေရောင်ခြည်သုံး မိုနိုခရစ်စတယ်လီဆီလီကွန်နှင့် ပေါ်လီကရစ်စတလိုင်းဆီလီကွန်ကြား ကွာခြားချက်
1. အသွင်အပြင် ကွဲပြားမှုများ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆိုလာပြား အစိတ်အပိုင်းရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ကြည့်ရအောင်။ monocrystalline silicon cell ၏ လေးထောင့်များသည် ထောင့်ပုံစံဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပုံစံမရှိပါ။ polycrystalline silicon cell ၏ လေးထောင့်များသည် စတုရန်းဖြစ်ပြီး၊ မျက်နှာပြင်သည် ရေခဲပန်းများနှင့် ဆင်တူသော ပုံစံရှိသည်။
2. ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်း ကွာခြားချက်များ
ပြောင်းလဲနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရ၊ monocrystalline silicon ၏ပြောင်းလဲနှုန်းသည် polysilicon ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ ထို့ကြောင့်ဆက်စပ်စျေးနှုန်းသည် polysilicon ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ခုကြားက ကြီးကြီးမားမား ကွာခြားမှုမရှိပါဘူး၊ အသုံးပြုရတာနဲ့ တည်ငြိမ်မှုက အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွင်၊ monocrystalline silicon ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် polysilicon ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်၊ ၎င်းသည် monocrystalline silicon ၏ပြောင်းလဲနှုန်းသည် polysilicon ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည့်အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်သည်။
နှစ်ခု၊ တစ်ခုတည်းသော crystal နှင့် polycrystalline ဆိုလာပြားများကြား ကွာခြားချက်
Monocrystalline photovoltaic panels များကို polycrystalline photovoltaic panels များထက်စောပြီး အသုံးချခဲ့သော်လည်း polycrystalline photovoltaic panels များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် monocrystalline photovoltaic panels များထက် ပိုမိုမြန်ဆန်ပါသည်။
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွင် ပိုလီဆီလီကွန်အသုံးပြုမှုသည် 30% နှင့် 70% ရှိသည့် monocrystalline silicon ထက် များစွာမြင့်မားသည်။
Monocrystalline နက်ပြာ၊ အနက်ရောင်နီးပါး၊ ပိုလီဆီလီကွန် ကောင်းကင်ပြာ၊ တောက်ပသောအရောင်။ တစ်ခုတည်းသော ပုံဆောင်ခဲဆဲလ်သည် စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး၊ ပိုလီခရစ်စတယ်ဆဲလ်သည် စတုရန်းဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသော crystal ၏ထိရောက်မှုသည် polycrystal ထက် 10% မှ 20% ခန့်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
တစ်ခုတည်းသော crystal ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် polycrystal ထက်အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးသည်။ ထုတ်လုပ်သူ အမျိုးမျိုးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က မတူပါဘူး။ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးမှာ တစ်ဝပ်လျှင် ငါးမှတ်မှ ဆယ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
6. အတိုင်းအတာ လျော့ချခြင်း ဒေတာကို ကြည့်ပါ။
တစ်ခုတည်းသော crystal နှင့် polycrystal တို့၏ ပျက်စီးနှုန်းကို တစ်ခုတည်းသော crystal နှင့် polycrystal နှင့် ခွဲခြား၍မရပါ။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့် သက်ဆိုင်သော (တံဆိပ်ခတ်မှုဒီဂရီ၊ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရှိမရှိ၊ လျှို့ဝှက်အက်ကွဲခြင်းရှိမရှိ) သည် နှိမ့်ချမှုအတိုင်းအတာအပေါ် ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်သူ
လက်ရှိတွင်၊ polycrystal ၏စျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် single crystal ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်းလက်ရှိတွင်သာဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော crystal အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
Solar Modul ၏ အမြင့်ဆုံး output power ကို မည်သို့ သိနိုင်မည်နည်း။